‘रात परेपछि’ले डराउन दिन्छ रे !
काठमाडौं । विजयराज भुर्तेलको निर्देशन रहेको चलचित्र ‘रात परेपछि’ अहिले डबिङको अन्तिम चरणमा रहेको छ । सम्पादन सकेलगतै च्यारिटीमा उत्रने ‘रात परेपछि’ चलचित्र केही महिनापछि मात्र सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने छ । चलचित्रमा दिल कुमार,...
सेक्स अपीलसहित मल्लिकाको डर्टी पोलटिक्स
मुम्बई । बलिउडकी बोल्ड गर्ल मल्लिका शेहरावत पछिल्लो समय चलचित्र ‘डर्टी पोलटिक्स’ अभिनयमा ब्यस्त छिन् । सामाजिक विषय उठाएको यो चलचित्र केसी बोकाडियाले निर्माण गरेका हुन् । यसको तुलना अहिले प्रियंकाको आउँदो चलचित्र ‘म्याडमजी’सँग...
गुरुङ चलचित्रकी निर्देशक जसुको ‘संगालो’
आश गुरुङ पोखरा। गुरुङ चलचित्रकी एक मात्र महिला निर्देशक जसु गुरुङले आफूद्धारा निर्देशित विभिन्न गाउँका गीति भिडियोको डिभिडी तयार पार्नुभएको छ । कास्कीको विभिन्न गाउँहरुको परिचयात्मक गीतहरु मध्ये ६ वटा गीतलाई छानेर पहिलोपटक जसुले गुरुङ...
विछोडपछि पनि छविको रेखालाई उस्तै माया, रेखालाई भेट्न हलसम्म पुगे छवि
काठमाडौं । दशबर्षसम्म श्रीमतीकी रुपमा रहेकी रेखा थापालाई अहिले पनि उनका श्रीमान एवं फिल्म निर्देशक छविराज ओझाले उत्तिकै माया गर्छन् । औपचारिक सम्बन्ध विच्छेद भएको करिब ३ बर्षसम्म पनि रेखाप्रति छबिलाई उत्तिकै माया र...
ठूली लिएर अमेरिका आएका जीवन एक महिना यतै बरालिने
विजय थापा डीसी । नेपाली चलचित्रका नायक जीवन लुइँटेल नेपाली चलचित्र ‘ठूली’ को प्रदर्शनको लागि अमेरिकामा आई पुगेका छन् । उनी अहिले चलचित्र ‘ठूली’ को प्रदर्शन गर्न अमेरिकाका विभिन्न राज्य तथा शहरहरुको भ्रमणमा निस्केका...
माओवादी नेता साह अब गीतकार
काठमाडौँ । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का नेता प्रभु साहले आफ्नो चिनारीमा थप विविधता थप्दै अब गीतकार र निर्माताको रुपमा समेत उभ्याउनुभएको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको ‘मधेस के माटी’ गीति एल्बममार्फत साह गीतकार÷निर्माताको रुपमा आउनुभएको हो...
उमेर बढ्दै जाँदा प्रजितालाई यौवन सम्हाल्नै गाह्रो (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । आफ्ना गीतबाट श्रोतालाई लोभ्याउँदै आएकी गायिका प्रजिता गेलालले यस अघि माया पिरती र गीतसंगीतका कुरा गरेपनि अहिले भने वैँशकै कुरा गरेकी छिन् । उनले आफु जवानीमा प्रवेश गरेको भन्दै यो वैँश थाम्न...
‘जवानी बिक्रीमा’ भन्दै झरना थापा उत्तेजित भएपछि… (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौं । पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा व्यस्त नायिका झरना थापाले नयाँ म्युजिक भिडियोमा उत्तेजक नृत्य गरेकी छिन् । अहिले ‘सेलमा छ जवानी’ शीर्षकको आइटम गीतमा उनले उत्तेजक नृत्य गरेकी हुन् । डान्सबारमा ग्राहकको अघि...
हिरोइनले यौन अंग देखाएपछि….
भर्खरैमात्रै मोडलबाट हिरोइन बनेकी अक्षरा हसनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भित्री अंग देखाएपछि यतिबेला बलिउड तातेको छ । शमिताभको बिग बी अभिताभ बच्चनका साथ काम गरेकी अक्षराको मुम्बईमा यही फिल्मको ट्रेलर लन्च कार्यक्रममा खिचिएको फोटो सार्वजनिक...
फिल्म निर्देशकले गरेको यौन प्रस्तावको हिरोइनबाट सप्रमाण पर्दाफास
काठमाडौं, २५ पुस । नेपाली फिल्मकी एक जना निर्देशकको कर्तुत पर्दाफास भएको छ । मोडल एवं नयाँ हिरोइन आयुषा राईले निर्देशक मुनाल शिशिर कोइरालाले गरेको यौन प्रस्तावको सप्रमाण पर्दाफास गरेकी हुन् । नायिका राइले...
मोडलले छोप्न खोज्दा सबै देखिएपछि… (हेर्नुस भिडियो)
पूर्व मिस इण्डिया तथा बलिउड अभिनेत्री अंकिता शोरीको एउटा भिडियोले यतिबेला इन्टरनेटमा हंगामा मच्चाएको छ । एउटा जिम क्लबको उद्घाटनका क्रममा उनले लगाएको कपडाले ठाउँ छोडेपछि तहल्का मच्चिएको हो । उनले पटकपटक कपडा तानेर...
डान्सिङ शो विजेता टपलेस भएपछि…(फोटोफिचरसहित)
स्ट्रिक्टली कम डान्सिङ शोकी विजेता कैरोलाइन फलैक शो जितेपछि जति चर्चामा छिन्, त्यो भन्दा बढी चर्चा उनले टपलेस बनेर बिकिनीमा सन बाथ लिँदै गर्दा भएको छ । जब उनी जमैकाको बिचमा सन बाथ लिन...
« 1 … 442 443 444 445 446 … 471 »
आफ्नै सरकार ढाल्न मन्त्री यादव सक्रिय, पुल्चोकबाट फोन घुमाउँदै
ओली-देउवा भेटवार्ताको खुलासा
काठमाडाैंमा १२ वटा माइक्राेबसमा आगलागी
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानसेनापति थापालाई बोलाउनुको कारण
अर्घाखाँची गुल्ममा मेस निर्माणमा आर्थिक चलखेलको खुलासा
ओली–प्रचण्ड वार्ता सुरु, निर्णायक हुने
करणी गरेको आरोपमा काठमाडौँमा २ जना पक्राउ
थप २९३ जनामा कोरोना पुष्टि, १३२ डिस्चार्ज
ओली-प्रचण्डबीच विवाद समाधानका लागि छलफल जारी राख्ने सहमति